Oduu Amma nugahe/Breaking News:NUNGALATEEFFATIINAA!- Hunkuraa Bulbulaa’tiin-Qoosaa kanaan Bohaaraa!! Waliifis Daddabarsa!! – Beekan Guluma Erena
Oduu Amma nugahe/Breaking News:NUNGALATEEFFATIINAA!- Hunkuraa Bulbulaa’tiin-Qoosaa kanaan Bohaaraa!! Waliifis Daddabarsa!!	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Personal Category, Politics Category December 11, 2016December 11, 2016Oromo Revolution@Qoosaa kanaan Bohaaraa
118SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Oduu Amma nugahe/Breaking News: Hunkuraa Bulbulaa’tiin
Dhaggeeffatoota keenyaa kabajamoo oduu amma nugahe qabna; oduu kana waliin ani ‘Hunkuraa Bulbulaa’ti. Hayyu Duree ‘face book’ gama ‘Marsariitii/website/’rratti qabsoo aja’aaibaa akka abiddaa laboobe geggeesse. Yeroo kanatti ajajaa zoonii kibbaa ‘Face book page’n ‘Twitter, ‘What’s up’ fi ‘skype’ faana ‘chaartera’ qopheessanii ‘like, ‘share’ fi comment’f diyaaspooraa keessatti uummata walitti qaban. Haata’u malee, walgahii kora kanaa gufannaa hamaan goolabani jiran. Tattaaffii waan jedhameefi ture kanatti kan dhimmaman ‘paltalk, ‘gmail’ fi ‘Yahoo’n komee qaban xiinxaluuf carraa mara gargaaramuun dubbiiwwan ta’an alanfatani tufaniiru. Ajajaan itti gaafatama riphee Lolaa ‘Teleconference’nis gama isaaniitiin loltoota qaban mara gara dirree waraanaatti gadi yaasan. Bifuma kanaan yaada waldhahaa qophaa’e sanaa waliigaluu waan dadhabaniif waraanni jajjabaan ‘live video’ dhaan eegalee lukeelee diinaa daldala qaxxaamuraatiif fiigan hojiin ala gochuusaa ajajaan Zoonii Kaabaa Jaal ‘TV’ fi ‘Raadiyoo’ ifa godhani jiran. Bu’aan qabsoo kanarraa argames jiraattota nagaa Zoonii hundumaa keessa jiran akka Shororkeesse jirattoonni miidiyaaf yaada isaanii kennaniiru. Diddaa kanarraan kan ka’e ajaajoonniifi itti gaafatamoonni waraanaa gandaaf amantiitti akka caccaban basaasaan Zoonii biraa kan ta’e ‘google group’n addeessee jira. Yaaliin ajjeechaa dhaaba duraan turerratti taasifames guutummaan guutuutti akka fashalaa’e ajajaan Zoonii Lixaa Obbo ‘fakeshow’ balballoomseera. Dhimmamtoonni/aktivistoonni deggaraa, dabballeefi miseensa guutuu ta’uun dhaabicha keessa turanis waldhabbii isaan gidduutti ta’erraan kan ka’e, dhaaba yeroofi dhaloonni barbaadu tokko akka hundeessan irratti waliigalan. Waldhabbii hayyuu duree, ajajoota zoonii maraafi ona hundumaatti kan gammade moootummaan misoomawaafi dimookiraatawaa ofiin jedhu ittisa oolcha balaa biyyaa (State of emergency) labsuun jiraattota nagaarratti miidhaa hamaa qaqqabsiiseera. Jiraattonnis bilisummaafi walabummaa dhuunfaa isaaniitiif hayyuu dureewwan amanamoo of gidduudhaa kaafachuun sirna nama nyaataa kana akka ofirraa fonqolchan sagalee guutuun mirkaneessaniiru.
Dhumarrattis, uummanni nagaan labsii ejjennoo walgahii isaanii keessatti qabxiileewwan armaan gadii waltajjirratti ba’uun akka dubbifamu ta’ee jira. Ibsa ejjennoo kanas fuuladuratti ba’uun kan dubbise itti gaafatamaa warraaqsa gartuu fashaleessaa yoo ta’u, ibsichis kan kanaa gadiiti:
a. Har’aa kaanee gandaaaf naannoo jennee wal hinqoonnu,
b. Akka walitti siqeenyaatti dantaa Oromoof murtee dhuunfaa keenyaa hinlaannu,
c. Shira dhoksaatti qophaa’uun gadi baafame nibalaaleffanna,
d. Dhaloota nagaa biyya keessatti gama danda’een qabsoorra jiru hingoollu,
e. Sammuu furrii habashummaafi Xoophiyummaaf of qopheesse qulqulleessinee niganna,
f. Siyaasa Oromoo madda daldalaafi itti of beeksifannaarrraa walaba taasifna,
g. Qabsoo warruma biyya keessa jiraniif dhiifnee nuti warri diyaaspooraa dalagaa keenyaa raawwatannaafi kkf ture. Dhaggeeffatoota keenyaa, oduun nuti ammaaf qabannee dhihaanne asumarratti xumurama; oduu keenyaa itti aanaaniif abdiifi hawwii guddaan akka nu eeggattan gamanumaan waadaa isiniif galla. Waan nudhaggeeffatanif isin galatoomfanna; isin garuu nun galateeffatiinaa’!
INJIFANNOON MIIDIYAALEE HAWAASAAF
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa118SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← The inevitable for disintegration of Ethiopia, the cause and Abyssinian unbending arrogance. By Liban Wako Filate
QOTIYYOO ARFANUU-Abdiisaa Balaachoo- Warra Walnyaatu gidduutti!! →